Casharro aasaasi ah oo lagu barto sida loo isticmaalo GIMP | Abuurista khadka tooska ah
Cashar barasho aasaasi ah oo lagu barto sida loo isticmaalo GIMP
Waxaa ka mid ah qalabka aan u isticmaali karno naqshad sawireed, GIMP had iyo jeer wuxuu ahaa asalka. Tani waa sababta guud ahaan dadku waxay u barteen barnaamij kale, waxay ku adag yihiin inay la qabsadaan interface kale iyo habka loo adeegsado shaqooyinkeeda si ka duwan sidii hore, markaa waxay u muuqan kartaa inay isticmaaleyso GIMP aad ayey uga dhib badan tahay tafatirka kale ama barnaamijyada naqshadeynta.
In kasta oo ay u muuqato xoogaa dhib badan oo u baahan wakhti yar oo dheeraad ah si loo barto isticmaalka qalabkan, waan tixgelin karnaa taas barnaamijkan waxaa loo muujiyey shaqo kasta oo tafatir sawir ah oo fudud iyo sidoo kale in la qabto shaqo aad u horumarsan oo loogu talagalay naqshadeynta garaafka markii aan baranno barnaamijka.
1 Sababtaas awgeed, qodobkani wuxuu kuu keenayaa cashar aasaasi ah oo lagu barto sida loo isticmaalo GIMP
1.2 Hawlaha aasaasiga ah
Sababtaas awgeed, qodobkani wuxuu kuu keenayaa cashar aasaasi ah oo lagu barto sida loo isticmaalo GIMP
GIMP waa qalab loo heli karo nidaamyada hawlgalka Windows, Linux iyo MacWaxaan sidoo kale si toos ah uga soo dejisan karnaa degelkeeda rasmiga ah, adoo adeegsanaya BitTorrent, habka rakibidda ayaa la mid ah barnaamijyada kale ee Windows.
Haddii aan dooranno kan ikhtiyaar u leh in lagu sameeyo rakibaadda gaarka ah, waan beddeli karnaa goobta aan u socono inaan kaydino barnaamijka, laakiin intaas ka sokow, waxaan kugula talin lahaa ka saar gabi ahaanba waxba si aad si buuxda ugu raaxaysato barnaamijka. Qodob kale oo aan ku iftiimin karno markii la rakibayo barnaamijka ayaa ah inaan la jaan qaadi karno GIMP noocyada waaweyn ee feylasha muuqaalka.
Haddii aan bilowno barnaamijka markii ugu horreysay, waan helnaa taas GIMP ma laha hal daaqad adeegsi, sida barnaamijyada kale ee Windows, laakiin waxay leedahay saddex. Dabcan tani waxay noqon kartaa wareer, xallintana waxaan tagnaa liiska "daaqadahaDaaqadda weyn waxaan u wareegeynaa hal hab daaqad.
Tan iyo markii aan tan samaynay waxaan yeelan karnaa muuqaal aad u badan oo caan ah oo aan si faahfaahsan ugu fiirsanno kuwa meelaha kala duwan ee interface ka, kuwaas oo aan ka xusi karno saddex meelood oo waaweyn.
Waxaan kaheleynaa dhinaca bidix dhanka bidix oo na tusaya aaladaha GIMP iyo xulashooyinka aaladaha aan dooranay waqti kasta.
Waxaan leenahay a dhinac dhinac midig, taas oo aan ku heli karno dhammaan menusyada lakabyada, jidadka iyo kanaalada, taariikhda isbeddelada iyo xagga hoose ee aan ku hayno, darfaha burushyada, qaababka iyo miisaska.
Aagga dhexe waa halka aan ka arki karno sawirka ama sawirrada aan ka shaqeyneyno xilligan. Dabcan qaanadahan waa la habeyn karaaWaxaan sidoo kale ku dhejin karnaa walxaha kala duwan sida aan u jecel nahay, kaliya adoo jiidaya isla markaana hoos u dhigaya walxahaas hortiisa ama gadaashiisa mid kale.
Waxaa jira hawlgallo aasaasi ah oo aan guud ahaan u baahannahay inaan mar walba ku qabanno GIMP iyo tan waxaan ka fureynaa sawir liiska menu-ga, halka ay ka muuqan doonto cabir buuxa qeybta dhexe ee barnaamijka. Waxay u badan tahay inay u muuqan doonto inay qabsaneyso aagga dhexe oo dhan, laakiin waxaan ka yareyn karnaa cabirkeeda muuqaalka muuqaalka, dalabka ama sidoo kale aaladda si aan ugu weyno dhinaca dhinaca bidix.
Si aad u awooddo bedel sawirka, waxaan aadeynaa menu-ka sawirka, cabirka sawirka. Daaqadda furan waxaan ku geli karnaa cabirrada cusub ee aan jecel nahay kuwa ugu badan ee yiri sawirka ayaa leh, annagoo adeegsanayna cabbirka cabirka ka soo muuqda.
Xuquuqda ku xigta halka ay cabirka dhererka iyo ballaca Waxaan arki doonnaa astaan ​​qaab silsilad u eg, taas oo muujin doonta in marka la beddelayo ballaca sawirka uu si is le'eg u dhigmi doono, iyadoo laga fogaanayo inuu qalloocan yahay oo haddii qiimuhu uusan si otomaatig ah ula qabsan, waxaan riixnaa furaha tabulator.
Si loo abuuro sawir waa inaan kaliya xulo qalabka wax-soo-saarka dhinaca bidix ee bidix waxaanan ka dul sawireynaa sawirka aan dooneyno inaan xafidno iyo haddii aan rabno inaan badbaadino sawirka, badiyaa waxaan ku sameynaa badbaadi sida, laakiin waxay ahaan lahayd qaab ahaan GIMP.
Sidaad aragtay, waxba kama fududaan isticmaalka qalabkan cajiibka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Gimp » Cashar barasho aasaasi ah oo lagu barto sida loo isticmaalo GIMP